WINDOWS 10 VAKA 17711 YAKABURITSWA NEAUTO SUGGEST YEREGISTRY EDHI UYE NEZVIMWE - WINDOWS 10
Windows 10 Vaka 17711 yakaburitswa neAuto Suggest yeRegistry Edhi uye nezvimwe
Microsoft nhasi yaburitswa Windows 10 Insider Preview Vakai 17711 (RS5) kune Windows Insider mune yekukurumidza mhete kuwedzera kune avo vakasarudza kupinda Skip Mberi. Nezvazvino Redstone 5 kuvaka 17711 Microsoft inosanganisira dzinoverengeka nyowani dzekuvandudza kweMicrosoft Edge. Iko kune zvakare zvekare kuwedzeredza kune iyo Inonzwisisika Dhizaini ruzivo uye kugadzirisa kune Registry Edhi pamwe nekuratidzira kuvandudzwa kweiyo HDR zvemukati. Pano ipfupi shanduko uye kugadzirisa zvakaverengerwa pa Windows 10 Vaka 17711 .
Zviri Mukati ratidza 1 Microsoft Edge Kuvandudza 1.1 Anonzwisisika Dhizaini akagadziridzwa piri Ratidza Kuvandudza 2.1 Registry Edhi Kuvandudza
Microsoft Edge Kuvandudza
Sezvo Microsoft ichienderera mberi ichivandudza, wedzera shanduko nyowani pamupendero webrowser kutora mukwikwidzi wavo chrome neFirefox. Izvi zvinovaka 17711 sekuunza boka rekuvandudza kuMicrosoft Edge. Aya matsva maficha ndeaya:
● Pasi pe chokushandisa kudzidza YeKuverenga Kuona, iwe unogona ikozvino kuona zvimwe zvingasarudzika misoro. Kunze kwekuburitsa chikamu chekutaura, unogona kuchinja ruvara rwechikamu chakapfuura uye kuvhura chiratidzo pairi kuti zvive nyore kuziva chikamu chekutaura.
sei kubvisa google yekutsvaga bar Android
Misoro mitsva yemavara
Izvo zvinouyawo nechinhu chitsva chinonzi Mutsara unotarisa izvo zvinobatsira iwe kunatsiridza kutarisisa uchiverenga chinyorwa nekusimbisa imwe, mitatu, uye mishanu mitsara.
Paunochengetedza iyo yekuzadza dhata, unogona kuona iyo nyowani dialog:
● Bhurawuza reMicrosoft Edge rinokumbira mvumo kubva kumushandisi nguva dzese usati wachengeta mapassword uye zvakazadza auto-kadhi.Microsoft yakagadzirisa pop-up uye dhizaini dhizaini kuvandudza kuwanikwa uye nekujekesa kukosha kwekuchengetedza ruzivo urwu.
● Shanduko idzi dzinosanganisira kuiswa kwepassword nemifananidzo yekubhadhara (mamwe maficha anotonhorera), mameseji akavandudzwa, uye kuratidza sarudzo.
Nyowani Chibvumirano Bhokisi
Iyo toolbar yePDF iko zvino inogona kudaidzwa kubva kumusoro hover kuti vashandisi vagone kuwana aya maturusi.
Anonzwisisika Dhizaini akagadziridzwa
Fluent Dhizaini yaive yatowanikwa muMicrosoft Edge, asi neiyi nyowani yekuvaka, iri kuita zvirinani. Microsoft iri kuunza Fluent Dhizaini inobata kune yemukati mamiriro.
“Mimvuri inopa hukuru hwekuona, uye neBuilder 17711 mazhinji edu ezvimisikidzo emhando dzazvino popup mhando dzekudzora dzava nadzo izvozvi. Izvi zvinogoneswa pane seti diki yekutonga pane zvinozopedzisira zvaonekwa nevanhu vese, uye veInsider vanogona kutarisira kuona rutsigiro ruchikura mukuvaka kunotevera, 'inotsanangura kambani.
Mimvuri inopa hutongi hwekuona
Microsoft iri pakupedzisira kuwedzera Windows HD Ratidza Ratidza Zvirongwa. Kana yako kifaa ikasangana nezvinodiwa, inogona kuratidza yakakwira ine simba renji (HDR) zvemukati, zvinosanganisira mapikicha, mavhidhiyo, mitambo, uye maapp. Iyo nyowani marongero anonyanya kubatsira iwe kuti unzwisise uye kugadzirisa chako chishandiso cheHDRm zvemukati. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo yekugadzika inoshanda chete kana iwe uine HDR-inokwanisa kuratidza.
Iyo Windows HD Ruvara Zvirongwa peji ikozvino inoshuma pane inoenderana maitiro masisitimu uye inobvumira HD Ruvara kuti igadziriswe pane ine simba system, mazhinji acho anogona kuitwa munzvimbo imwechete.
Ratidza Kuvandudza Windows 10 Vaka 17711
Registry Edhi Kuvandudza
Kutanga nekuvakwa kwanhasi, Microsoft yakagadzirisa muRegistry Edhi uko mushandisi anogona kuona kudonhedza pasi sezvavanonyora, izvo zvinobatsira kukurumidza kupedzisa nzira yepazasi.
Iwe unogona zvakare kudzima izwi rekupedzisira ne 'Ctrl + Backspace' kuti upedze basa rekuchengetedza nekukurumidza (Ctrl + Delete ichabvisa iro rinotevera izwi).
registry edhita autocomplete ficha
Heano kutarisa kweimwe yeimwe shanduko dzese uye kugadzirisa kwesisitimu inosanganisirwa mukuvakwa kwanhasi uko kunosanganisirawo chiyeuchidzo icho Maseti abviswa :
CHIRANGARIDZO: Ndatenda nekuenderera mberi kwako kutsigira kwekuyedza Maseti. Isu tinoramba tichiwana mhinduro yakakosha kubva kwauri isu patinokudziridza chiitiko ichi kubatsira kuona kuti tinounza akanakisa chiitiko kana chagadzirira kuburitswa. Kutanga neiyi kuvaka, isu tiri kutora Maseti isingaenderani kuenderera nekuigadzira. Zvichienderana nemhinduro yako, zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisisa zvinosanganisira kugadzirisa kune dhizaini yekuona uye kuramba uchibatanidza zvirinani Hofisi neMicrosoft Edge mumaSeti kusimudzira kufambiswa kwebasa. Kana wanga uchiedza maSeti, hauchazvioni sezvazvino zvekuvaka kwanhasi, zvisinei, maSeti anodzoka mune yemberi ndege yeWIP. Ndatenda zvakare nemhinduro yako.
Isu takagadzirisa nyaya yakanga yadzoreredza iyo nguva inotora kuendesa kure uye kugadzirisa iyo UWP kunyorera kune yemuno chaiyo muchina kana emulator.
Isu takagadzirisa nyaya inogona kukonzeresa kune chero nzvimbo yakashandiswa kuburitsa (kusanganisira Start matiles uye Zvirongwa zvikamu) ichienda chena chose.
Isu takagadzirisa nyaya inokonzeresa kuti vamwe veImukati vaone 0x80080005 kukanganisa kana uchisimudzira kuenda nendege dzichangoburwa.
Isu takagadzirisa nyaya uko iyo 'Uri kuwana iyo yekuvandudza' dialog yakaratidza isingatarisirwe mamwe mavara.
Isu takagadzirisa nyaya uko kubvisa kubvisa kunovhiringidza kuiswa muUWP maapplication kusvika kudzorerazve.
Isu takagadzirisa nyaya nendege dzichangoburwa uko kuyedza kupinha maSystem maratidziro kuKutanga kwaigona kukanganisa Zvirongwa kana kuita chero chinhu.
Isu takagadzirisa nyaya inokonzeresa Ethernet uye neWi-Fi Zvirongwa zvisingatarisirwi zvisipo zvemukati mundege yekupedzisira.
Isu takagadzirisa yakakwira kurova Zvirongwa zvinokanganisa mapeji ane Get Rubatsiro zvemukati, zvinosanganisira Touchpad Zvirongwa, Maakaundi Zvirongwa, uye Mhuri uye Mamwe maVashandisi Mapepa mapeji.
Isu takagadzirisa nyaya inogona kukonzeresa Sign-In Zvirongwa kushaya chinhu dzimwe nguva.
Isu takagadzirisa nyaya uko epamberi keyboard marongero angangoerekana aratidzira 'mamwe marongero akavanzwa neyako org'.
Isu takagadzirisa nyaya uko kugadzira system system kubva backup uye kudzoreredza mune control panel kwaizokundikana pane x86 michina.
windows 10 1903 yakundikana kuisa
Isu tafunga kudzima iyo acrylic kumashure muTask View - nekuti izvozvi dhizaini inodzokera kune iyo yavakatumira mukuburitswa kwakapfuura, nemaacrylic makadhi pachinzvimbo. Kutenda munhu wese akambozviedza.
Isu takagadzirisa nyaya iyo mushure mekushandisa izwi kubvunza Cortana mimwe mibvunzo iwe ungatadza kumubvunza iye wechipiri mubvunzo nezwi.
Isu takagadzirisa nyaya inogona kukonzeresa kuti explorer.exe ipunzike kana mamwe maapplication akaderedzwa kana uchichinjira kune yepiritsi mode.
PaKugovana tebhu muFaira Explorer, isu takagadzirisa iyo Bvisa mukana icon yekuwedzera mazuva ano. Isu takaitawo mamwe ma tweaks kuAdvanced security icon.
Isu takagadzirisa nyaya inogona kukonzeresa kuti koni ikanganwe iyo yekorara vhoriyamu pane kusimudzira uye ichatanga kumisikidzwa ku0x000000 (nhema). Kugadziriswa kwacho kunodzivirira vashandisi venguva yemberi kurova iyi nyaya, asi kana iwe watove wakakanganiswa neichi chipenga, iwe uchafanirwa kugadzirisa manzwi mamiriro ari mune rejista. Kuti uite izvi, vhura regedit.exe uye bvisa iyo 'CursorColor' yekupinda mu 'Computer HKEY_CURRENT_USER Console' uye chero epasi-makiyi, uye wotangazve yako console hwindo.
Isu takataurirana nezvenyaya iyo mutyairi odhiyo yaizoturikwa pamatauri mazhinji eBluetooth uye mahedhifoni anotsigira iyo Hands-Mahara profil.
Isu takagadzirisa nyaya inokonzeresa iyo Microsoft Edge yekufarira pane kupuruzira padivi pane kumusoro uye pasi pagumbo vhiri mundege dzichangopfuura.
Isu takagadzirisa zvinhu zvishoma zvinokanganisa kuvimbika kweMicrosoft Edge mune dzendege dzekupedzisira.
Isu takagadzirisa nyaya inokonzeresa Internet Explorer kurasikirwa neese marongero uye kusasimudzwa kubva kubha rebasa neimwe yendege dzekupedzisira shoma.
Isu takagadzirisa nyaya inokonzeresa kuti ethernet isashande kune vamwe veImukati vachishandisa Broadcom ethernet madhiraivha pane yekare hardware mune yekupedzisira ndege.
kudzorera sei kuratidza vatyairi windows 10
Isu takagadzirisa nyaya uko kudzoreredza muPC inomhanya nendege yapfuura kwaigona kuguma nekungoona hwindo dema.
Isu takagadzirisa nyaya inogona kukonzeresa kuti mimwe mitambo iturike kana uchinyora muwindo rehurukuro.
Isu takagadzirisa nyaya kubva kuendege yekupedzisira uko kufungidzira kwemavara uye mameseji ekunyora mamiriri aisazowanikwa mune yekubata keyboard's mukwikwidzi runyorwa kusvikira backspace yakadzvanyirirwa uchitaipa.
Isu takagadzirisa nyaya apo panotanga Narrator iwe waizopihwa dialog iyo yakazivisa mushandisi shanduko kune Narrator's keyboard dhizaini uye iyo dialog inogona kusatora tarisiro kana kutaura mushure mekunge Narrator yatanga.
Isu takagadzirisa nyaya apo iwe pawakachinja Narrator's default Narrator kiyi kungoisa kiyi yekukiya kiyi yekuisa yaizoramba ichishanda kudzamara kiyi yekukiya kiyi yashandiswa sekiyi yeNarrator kana kana mushandisi atangazve Narrator.
Isu takagadzirisa nyaya kana yako System> Ratidza> Kuyera uye dhizaini isina kuiswa ku100%, mamwe mameseji anogona kuoneka kunge madiki mushure mekudzosera 'Ita mameseji akakura' kukosha kudzokera ku0%.
Isu takagadzirisa nyaya iyo Windows Mixed Reality ingangonamirwa mushure mekurara uye kuratidza inopfuurira yekukanganisa meseji muMixed Reality Portal kana bhatani re 'Muka' risingashande.
Kuti uone zvinyorwa zvese zvekuburitsa, unogona kuverenga iyi Microsoft blog post .
tanga menyu muma windows 10 yakamira kushanda
windows 10 ethernet isiri kushanda
windows 10 haigadzirise kusvika 1903
kukanganisa kwakakomba yako yekutanga menyu haisi kushanda
windows 10 isiri kuratidza zvigunwe